देश पुरै लकडाउन भएको बेला कस्तो अवस्थामा बाहिर निस्किन पाइन्छ ? - Himali Patrika
देश पुरै लकडाउन भएको बेला कस्तो अवस्थामा बाहिर निस्किन पाइन्छ ?
हिमाली पत्रिका ११ चैत्र २०७६, 3:42 am
नेपालमा कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाइ मध्यनजर गर्दै सरकारले करिव एक हप्ताको लागि नेपाल लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। अति आवस्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाउने गरी सरकारले देशैभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, औषधी उपचार खानेपानि लगाएतका सरवारीसाधानहरु भने प्रतिबन्द गरेको छैन।
के गर्न पाइने के नेपाइन ?